संसारकै सवैभन्दा ठूलो हवाइजहाजको परीक्षण उडान सफल, यस्ता छन् यसका विशेषता, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
संसारकै सवैभन्दा ठूलो हवाइजहाजको परीक्षण उडान सफल, यस्ता छन् यसका विशेषता
एजेन्सी । शनिबार संसारको सबैभन्दा ठूलो विमानले पहिलो परीक्षण उडान गरेको छ । ‘स्ट्राटोलञ्च’ नाम दिइएको विमानलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा रहेको एक मरुभूमिबाट उडाइएको थियो । लगभग अढाई घण्टा चलेको परीक्षण उडान क्यालिफोर्नियाको मोजावे मरुभूमिमा गरिएको थियो ।
विमानमा ६ वटा बोइङ ७४७ इन्जिन लागेको छ । विमान यति ठूलो छ कि यसको एउटा पखेटा फुटबल मैदानभन्दा ठूलो छ । यसलाई ‘स्केल्ड कम्पोजिट्स इन्जीनियरिङ कम्पनी’ले तयार पारेको हो । विमानलाई रकेट लिएर अन्तरीक्षसम्म उडान भर्ने हिसाबले निर्माण गरिएको छ । विमानमा अन्तरिक्षमा पुगेपछि सँगै लगिएको रकेट सुचारु हुने र भू–उपग्रहलाई अन्तरिक्ष खसाल्ने प्रविधि जडान गरिएको छ ।
हाल भू–उपग्रहलाई अन्तरिक्षमा पुर्याउन जमिनबाट उडाइने रकेट निर्विकल्प रहदैं आएको छ । यस विमानको प्रयोग सुरु भएपछि यसले भू–उपग्रहको अन्तरिक्ष ढुवानीमा हाल जमिनबाट रकेट उडाइने तरिकाको विकल्प दिनेछ । यो माध्यमले भू–उपग्रह अन्तरिक्षमा पुर्याउन रकेटबाट हुने खर्चलाई निक्कै कम गर्नेछ ।
विमान हाल प्रयोग भइरहेको वायुयानकै जस्तो बडियुक्त हो । तर यसमा बडि आपसमा जोड्ने प्रविधि अपनाइएको छ । यसमा २ वटा इन्धन ट्याङ्की, ६ वटा इन्जिन र ११७ मिटर लामो पखेटा छन् । परीक्षणका क्रममा विमान अधिकतम ३०४ किमी प्रति घण्टाको रफ्तारसम्म पुगेको थियो भने यो १७ हजार फिटको उचाईमा पुगेको थियो ।